Sri Lanka: Nin dad badbaadi u biimeeyey naftiisa - BBC News Somali
Sri Lanka: Nin dad badbaadi u biimeeyey naftiisa
Ramesh Raju wuxu ka hor joogsaday nin weerara inuu galo kaniisad dad ka buuxeen
Qoyska mid ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxyadii Axaddii ka dhacay Sri Lanka ayaa sheegay in tallaabadii uu qaaday ay badbaadisay dad badan. Ramish Raju ayaa nin boorso dhabarka ku sitay ka horjoogsaday inuu galo kaniisadda Zion oo dad cibaadaysanayey ka buuxeen. Hadii ay u suurto geli lahayd in ninkii weerarka ahaa galo, khasaaruhu wuu ka badan lahaa inta uu haatan yahay.
Boodh cad oo weyn oo lagu dhegjiyey wajahadda guriga Chrishanthini Ramesh oo ku yaal magaalo xeebta bari ee Sri Lanka ku taal oo la yidhaa Batticaloa, ayaa dhanka bidix waxa kaga yaal sawir nin shaarubo leh oo muusoonaya oo kamarad eegaya, oo gashan shaadh boor ah.
Magaciisu waa Ramesh Raju, wuxu ahaa nin reer leh oo aabbo ah kana shaqayn jiray dhismaha da'diisuna 40 jir ahayd.
Markaanu ku sii dhawaanay wadada ciidda miidhan ah ee guriga tagta, ayaa waxaan aragnay dad badan oo kuraas caaga ku fadhiya.
Sida ay noloshuba ugu tahay waayo la wadaago qoysaska iyo asxaabta bulshada halkan ku dhaqan, ayey geeriduna u tahay. Ehel ka kala yimid meelo fogfog ayaa iskugu yimi tacsida. Qaarkood ayaa iyaga oo anfariirsan telefoonnadooda taataabanaya, kuwo kalena way ooyayaan. Haweenay dhar doog ah xidhan ayaa oohinteeda la aamusiin kari la'yahay.
Markaanu dhex maraynay dadka isugu yimid goobta, ayaa waxa na la tusay Chrishanthini iyo labadadeeda caruur ah Rukshika iyo Niruban oo 14 iyo 12 jir kala ah.
Chrishanthini waxay macallimad diinta dhigta ka tahay kaniisadda Zion, Axaddii horena, sida u caadada ah macalin kasta ayay u kallahday si ay xiisado u dhigto.
Iyada iyo Ramesh caruurtooda kaniisadda ayey u kaxayn jireen todobaad walba si ay u cibaadaystaan, isagoo socda ayuu yimid si uu cibaadada ugala qayb galo. Markii xiisadihii dhamaadeen ayaa Chrishanthini iyo qaar caruurta ka mid ahi dibada u bexeen si ay cunto fudud u doontaan inta aan cibaadada Easterku bilaabmin.
Burburka kaniisadda Zion
Ramesh laftiisu daaradda ayuu taagnaa markuu arkay nin uu garan waayey oo dhabarka ku sitay boorso weyn. Ninku wuxu ku yihi waxa ku jira boorsada kamarad uu doonayey inuu muuqaallo kaga duubo dadka gudaha ku cibaadaysanaya.
"Ninkaygu wuxu dareemay in wax si yihiin, markaasuu ku yidhi marka hore waa inaad fasax soo qaadataa, ka dibna wuxu ku qasbay inuu meesha ka tago" ayay igu tidhi Chrishanthini.
Markay dhanka Kaniisadda u dhaqaaqday ba oo ay ku jireen dad ilaa 450 qof ahi, ayay maqashay qarax weyn, waxaanay ahayd maalintii ugu naxdinta badnayd sannadka.
Markii anfariirku dhacay ayaa dadkii goobta ku jiray qaarkood is tubeen gidaarrada kaniisadda si ay u eegaan waxa ku dhacay ehelkoodii dibadda taagnaa.
Dadku dhan walba way u yaaceen, guryo badanna dab baa qabsaday. Chrishanthini iyo qoyskeedu waxay ku yaaceen isbitaal u dhawaa oo ay Ramesh ka soo eega is yidhaahdeen.
Saacado ka dib ayay meydkiisii heleen. Wuxu isla markiiba ku dhintay goobtii uu taagnaa ee ay kaga tageen. Qoyska intiisa kale goor dambe ayay is heleen.
Ramesh waxa la aasay Isniintii, xubno ka tirsan booliska magaalada ayaa ka qayb galay aaska.
In kasta oo wixii uu sameeyey aanu isagu ku nabadgelin, hadana waxa ku badbaaday dad badan.
Aaska mid ka mid ah dadkii la laayey
Markaan la sheekaysanayey Chrishanthini may ilmayneyn laakiin markay ii sheegaysay waayo xiiso lahaa oo ay soo wada mareen saygeedii ay is waayeen ayay mar qudha barooratay.
"Waan jeclahay Masiixayga, waan jeclaay Masiixayga" ayay ku oyday iyada oo ilmadu ka qubanayso dhabannadeeda.
Chrishanthini xanuunku waa wax ay hore u soo dhadhamisay. Da'deedu waa 40 nolosheeda badankeedna agoonnimo iyo rajanimo ayay ku soo qaadatay, oo labadeedii waalid ba waxa lagu dilay dagaalkii sokeeye ee lagu hoobtay ee Sri Lanka.
"Hooyaday waxa la dilay aniga oo aad u yar, oo waa la gawracay" ayay igu tidhi.
"Dhawr sano ka dibna aabahay ayaa isna si aan weli la caddayn karin loo khaarajiyey" ayay ku dartay.
Murugadaa waxa u dheer, Chrishanthini waxay ii sheegtay in eddedeed ku dhimatay sunaami 2004-tii maalintii ciidda Christmass-ka ku xigtay ku dhuftatay magaalada Batticaloa oo 2000 oo qof ku dhinteen.
Dhulka fidsan ee bilicda leh ee ku yaal xeebta bari ee dalka waxa soo maray masiibooyin waaweyn oo marar badan dhacay, dadka ku dhaqan ee Chrishanithi ka mid tahayna xanuunkaas ayaa nolol maalmeedkooda ka mid noqoday.
Waxba dib u soo celin maayaan Ramesh-keedii ay jeclayd, laakiin falkisii geesinimada ahaa ee dadka badan badbaadiyey ayey ku samraysaa.